अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस – पहिलो महिला अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति…हार्दिक बधाई ! – yuwa Awaj
अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिस – पहिलो महिला अश्वेत अमेरिकी उपराष्ट्रपति…हार्दिक बधाई !
न्युयोर्क : अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडनले सांसद कमला ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार बनाएका छन् । अमेरिकामा यो पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने ह्यारिस पहिलो काला जातिकी महिला बन्नेछिन् ।
यसअघि अमेरिकामा दुई पटकमात्र महिलालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाइएको थियो । सन् २००८ मा रिपब्लिकन पार्टीले सारा पेलिनलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यस्तै, सन् १९८४ मा डेमोक्रेटिक पार्टीले गिरालडिन फेरारोलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको थियो । यद्यपि दुवैले निर्वाचन भने जित्न सकेनन्। अमेरिकाका दुवै पार्टीले अहिलेसम्म अश्वेत महिलालाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाएका छैनन् । अहिलेसम्म अमेरिकामा कुनै महिलाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्न सकेका पनि छैनन् ।
क्यालिफोर्नियाकी सांसद कमला ह्यारिस कुनै समय जो बाइडनलाई नै राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारको लागि चुनौती दिइरहेकी थिइन् । तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको दौडबाट बाहिरिएसँगै उनलाई बाइडनले निर्वाचनमा आफ्नो साथीको रूपमा छान्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो ।कमला ह्यारिस क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ता पनि बनिसकेकी छन् । उनले प्रहरीमा सुधारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छन् । रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट भने राष्ट्रपति पदको लागि डोनाल्ड ट्रम्पले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने उपराष्ट्रपतिमा अहिलेका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
बाइडनले कमला ह्यारिसलाई आफ्नो उपराष्ट्रपतिको लागि चयन गर्दै उनी एक निडर योद्धा रहेको बताएका छन् । बाइडनले क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ता हुँदा ह्यारिसले गरेको काम आफूले प्रत्यक्षरुपमा देखेको बताएका छन् । उनको कामबाट पहिला पनि आफूले गर्व गर्दै आएको र अहिले पनि उनलाई आफ्नो सहयोगीको रुपमा छान्न पाउँदा खुसी लागेको पनि बताएका छन् ।
कमला ह्यारिसले पनि आफूलाई उपराष्ट्रपति बनाएकोमा खुसी व्यक्त गरेकी छिन् । उनले बाइडनले अमेरिकीहरुलाई एक बनाउन सक्ने बताएकी छिन् । बाइडनले अमेरिकी नागरिकको पक्षमा लड्न आफ्नो पूरा जीवन लगाएको ह्यारिसको भनाइ छ । उनले बाइडनलाई राष्ट्रपति बनाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।
ट्रम्पले भने– अमेरिकाको लागि यो जोडी खराब छ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने जो बाइडनले कमला ह्यारिसलाई आफ्नो सहयोगी चयन गरेकामा निराशा व्यक्त गरेका छन् । उनले यी दुवैजना अमेरिकाको लागि खराब रहेको बताएका छन् ।
ट्रम्पले कमला ह्यारिसले धेरै झूटा कहानी सुनाएको भन्दै उनको आलोचना गरे । साथै, प्राइमरी चुनावमा पनि उनको प्रदर्शन राम्रो नरहेको अवस्थामा बाइडनले उनलाई किन छनोट गरेका हुन् भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ट्रम्पले प्राइमरी बहसको क्रममा कमला ह्यारिसले बाइडनप्रति निकै अपमानजनक व्यवहार देखाएको भन्दै यस्तो व्यक्तिलाई छनोट गर्न कठिन हुने ट्रम्पको भनाइ छ ।
को हुन् कमला ह्यारिस?
५५ वर्षीया कमला ह्यारिस डिसेम्बरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति उम्मेदवारको दौडबाट बाहिरिएकी थिइन् । कमला ह्यारिसका आमाबुबा आप्रवासी नागरिक थिए । उनकी आमाको जन्म भारतमा भएको थियो भने पिता जमैकाका थिए । ह्यारिसले हावर्ड युनिभर्सिटीबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरेकी थिइन् । ह्यारिस क्यालिफोर्नियाको महान्यायाधिवक्ता बनेकी थिइन् । यो पदमा पुग्ने उनी पहिलो महिला र पहिलो अफ्रिकी–अमेरिकी थिइन् । कमला ह्यारिस दुईपटक महान्यायाधिवक्ता बनिन् र सन् २०१७ मा उनी सांसद बनेकी थिइन् ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ह्यारिस यो पदका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताएका छन् । ह्यारिसले आफ्नो जीवनकालमा संविधानलाई बचाउनका लागि काम गरेको र जसलाई वास्तवमा न्याय चाहिएको थियो । त्यस्ता मानिसको पक्षमा लडेको ओबामाले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले ह्यारिसलाई उपराष्ट्रपतिको रुपमा छान्नु अमेरिकाको लागि राम्रो कुरा रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, ओबामाको पालामा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेकी र उपराष्ट्रपति पदको लागि प्रबल सम्भावना रहेको बताइएकी सुजन राइसले पनि कमला ह्यारिसलाई बधाई दिएकी छन् । बीबीसी
Prevकसैको तागत छ भने सरकार ढालेर देखाऊ, घरमा बसेर उफ्रेर हैन : मन्त्री भट्टराई !
Nextहाडजोर्नी दुखाइको अचुक औषधि जाइफल, यसरी प्रयोग गर्नुहोस ।(बिधि सहित)